Shadow Fight31.19.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.19.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Shadow Fight 3
Shadow Fight3၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မှောင်မိုက်အရိပ်၏ကမ္ဘာတစ်မော်ကွန်းစစ်ရဲ့အစွန်းမှာရပ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ Shadows ၏ Gates ကထဲကလာသောနားမလည်အင်အားသုံးယခုအာဏာသာမန်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအရိပ်စွမ်းအင်ယနေ့ခေတ်ကိရိယာတခုနှင့်တစ်ဦးလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လူတိုင်းမရေးရာ၏ဤပြည်နယ်ကောင်းတစ်ဦးအရာကိုတွေ့။
တစ်ဦးကအားကြီးသောစစ်တပ်အနွယ်သည်ကို Legion of Honour အန္တရာယ်ရှိသောစွမ်းအင်များဖျက်သိမ်းရေးသည်၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါမင်းဆက်လူတွေကိုအမြတ်အစွန်းနှင့် Craft များအတွက်အသုံးပြုသင်ယူခဲ့တယ်။ ထိုအခါလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Herald အရိပ်အာဏာအမှောင်ဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေ့လာတယျ။
သုံးသြဇာတိုက်လေယာဉ်သူတို့အမှုကို join ဖို့သငျသညျဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ လူနေမှုနှင့်တိုက်ပွဲများသုံးခုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ။ သူတို့ကလာနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာ့ကံကြမ္မာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဘယ်အခြမ်းကိုသင်ပေါ်မှာဆိုရင်?
အဆုံးမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ဤလောကသို့ငုပ်ယူပါ! အရိပ် Fight3အခမဲ့-to-play စသည်နှင့် 100% အသုံးပြုသူ-friendly ။ အခုသင့်ရဲ့စွန့်စားမှု Start, စစ်သည်တော်!
- ခေတ်သစ် 3D-ဂရပ်ဖစ်, လက်တွေ့ရူပဗေဒနှင့်ကာတွန်းခံစားပါ။
- ကစားသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့လမ်းသို့3ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ပွဲများစတိုင်များပေါင်းစပ်။
- အထူးအရိပ်စွမ်းရည်, အခွင့်အရေးနဲ့အဆင့်မြှင့်တင်အသုံးပြုပါ။
- လူအတော်များများ Quest များနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတ်လမ်းထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွငျးမှာအာရုံစှဲ။
- တမူထူးခြားတဲ့ဆုနှင့်အတူပုံမှန်အကြောင်းအရာအလိုက် In-ဂိမ်းဖြစ်ရပ်များအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်။
- duels အနိုင်ရမည်ဟု။ AI အနေဖြင့်ထိန်းချုပ်ရာအခြားကစားသမား '' ဇာတ်ကောင်ကိုအန်တု, သင့်ဒေသများ၏ TOP-100 ဦးဆောင်သူတစ်ဦးအရပျကို ယူ. တစ်ဦးရန်ပွဲကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာ!
WE NEKKI ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
သင်ရိပ်စီးရီး Fight ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကို join! လတ်ဆတ်တဲ့သတင်း, ကြေငြာချက်များ, ပြိုင်ပွဲနှင့်ပိုပြီး!
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/shadowfightgames
Shadow Fight3အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Shadow Fight3အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Shadow Fight3အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
gribosoft စတိုး 14 29.05k
Shadow Fight3ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Shadow Fight3အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.19.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://nekki.ru/privacy.php
လက်မှတ် SHA1: D6:11:09:D7:68:ED:AA:3A:D2:EF:A9:EF:35:7B:D1:AE:33:D5:F0:AB
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Nekki
အဖွဲ့အစည်း (O): Nekki
Shadow Fight3APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ